ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကြား ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများကြား ဆက်ဆံရေး ဆွေးနွေး
ရန်ပိုင်| February 18, 2013
ရခိုင်၊ ကမန်နှင့် မရမာ စသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအကြား ပျက်ပြားခဲ့ရသည့် ဆက်ဆံရေး ပြန်လည် တည်ဆောက် နိုင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ယမန်နေ့က ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ကမကထပြု စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (ALD)၊ ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ(RNDP)၊ ကမန် အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၊ ကမန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စသည့်နိုင်ငံရေးပါတီများ အပါအ၀င် မရမာကြီး လူမျိုးများနှင့် ရခိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အသင်းများ တက်ရောက်ကြကြောင်း၊ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခကြောင့် ပျက်ပြားခဲ့သည့် ဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင် လူမျိုးများနှင့် အစ္စလမ်ဘာသာဝင် ကမန်လူမျိုးများမှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ရခိုင် ဒေသအတွင်း အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခဲ့ကြ ကြောင်း၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ကွဲပြားသော်လည်း ယဉ်ကျေးမှုမှာ များသောအားဖြင့်တူညီရာ မည်သည် ပြဿနာမှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ယခုအခါ ဌာနေ ကမန်လူမျိုးများအတွင်းသို့ တဖက်နိုင်ငံမှ ဘာသာတူ လူမျိုးများ ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်လာမှု များပြား လာသည့် အတွက် အထင်အမြင်လွဲမှားကာ ကမန်လူမျိုးတချို့ တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ အိုးအိမ် ဖျက်ဆီးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုအတွက် နှစ်ဦး နှစ်ဖက်အချိန်ယူ ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းများကို ဆွေးနွေးကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(ALD) ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဦးလှမြင့်က“အဓိကပြဿနာက တိုင်းရင်းသား ကမန်လူမျိုး အကာအကွယ်ယူပြီး ခိုးဝင်လာတဲ့ သူတွေကြောင့် ပြဿနာတက်တာပဲ၊ မရမာကြီးလည်း ရခိုင်နဲ့အတူတူနေ လာနေကြ တာပဲ၊ အလားတူပဲ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေနဲ့လည်း အတူနေလာတာပဲ ဘာပြသနာမှမရှိဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
အစိုးရအဆက်ဆက်၏ ဥပဒေအားနည်းမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ခိုးဝင်လာသူများက ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအ၀င် ရန်ကုန်စသည့် မြို့ကြီးများတွင် ကမန် တိုင်းရင်းသားအမည်ခံကာ နေထိုင်မှုများ ရှိကြောင်း၊ ထိုအတွက် လူဦးရေ စာရင်းဇယားများဖြင့် ပြန်လည် စိစစ် ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကမန်တိုင်းရင်းသား ပါတီခေါင်းဆောင်များကလည်း သဘောတူကြသည်ဟု ဦးဦးလှမြင့်က ဆက်ပြောသည်။
ကမန် များသည် စစ်တွေ၊ ရမ်းဗြဲ၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ စသည့် မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်ကြပြီး လူဦးရေ ၄၀၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိရာ ယခုအခါ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေရသည်ဟု သိရသည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးကိုကိုကြီးကလည်း“အစဉ်အလာအားဖြင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး နေခဲ့တယ်ဆိုတာကို နှစ်ဖက် လက်ခံတယ်၊ တရားမ၀င် ၀င်လာသူတွေကြောင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြားမှာ အထင်လွဲမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း လက်ခံကြတယ်”ဟု ပြော သည်။
ကမန် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များကလည်း တဖက်နိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူများသည် ၎င်းတို့နှင့် ဘာသာတူဖြစ်သည် ဆိုသော် လည်း ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှာ မတူညီကြောင်း၊ ထိုအတွက် မိမိတို့၏ ရိုးရာဓလေ့များ မပျောက်ပျက်စေရန်အတွက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက ၀ိုင်းဝန်းကူညီရန် ပြောကြားကြောင်း ဦးကိုကိုကြီးက ဆက်ပြောသည်။
မကြာသေးမီက မောင်တောမြို့နယ် ငါးခူရကျေးရွာတွင် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဒေသတွင်း၌ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပိုမိုအားကောင်းလာရန် အဓိကဖြစ်ကြောင်း တက်ရောက်လာသူများက သဘောတူကြသည်ဟု သိရသည်။
လူဦးရေ ၁၆၁ သန်း ခန့်ရှိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ခိုးဝင်လာသူများသည် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း စသည့်လမ်းကြောင်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ မကြာခဏ ၀င်ရောက်မှုများ ရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လမှစ၍ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနှင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် လူအသေအပျောက် နှင့် အိုးအိမ် စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးရမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များက အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေ ညာခြင်း၊ ညမထွက်ရ အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
This entry was posted on February 18, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ၈ လအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ပြန်ပို့ရသည့် မြန်မာမွတ်စလင် ၁ သောင်းကျော်ရှိဟုဆို
မန္တလေးတွင် တရားမ၀င် နေထိုင်သည့် မြန်မာ စကားမတတ်သူများကိစ္စ ဖော်ထုတ်အရေးယူပြီ →